ကြက်သီးထစရာ ကောင်းလောက်အောင် မှန်လွန်း လို့ ပရိသတ်တွေ အရမ်း သဘောကျနေတဲ့ မေဦးရဲ့ခပ်ပြတ်ပြတ်ရင်တွင်း စကား တစ်ချို့ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ကြက်သီးထစရာ ကောင်းလောက်အောင် မှန်လွန်း လို့ ပရိသတ်တွေ အရမ်း သဘောကျနေတဲ့ မေဦးရဲ့ခပ်ပြတ်ပြတ်ရင်တွင်း စကား တစ်ချို့
ကြက်သီးထစရာ ကောင်းလောက်အောင် မှန်လွန်း လို့ ပရိသတ်တွေ အရမ်း သဘောကျနေတဲ့ မေဦးရဲ့ခပ်ပြတ်ပြတ်ရင်တွင်း စကား တစ်ချို့
ကိုယ်တိုင်ကအလှအပနှစ်သက်ပေမယ့် တိုင်းပြည် အရေးမှာတော့ ကိုယ်နှ စ်သက်တာတွေ အားလုံးကို ပစ်ချပြီး ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့တောထဲကိုဝင်ကာ တိုင်းပြည်အရေးအတွက် ကြိုးစားနေတဲ့ မိတ်ကပ်မေဦးဟာ လက်ရှိမှာသွေးအေးပြီး ပုံမှန်သွားလာနေကြသူတွေကို တိုင်းပြည်ဟာနွံထဲမှာပဲ ရှိနေသေးတဲ့အကြောင်း သတိပေးပြောကြား လာခဲ့ပါတယ်။ ခရီးသွားနေတဲ့ပုံတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး စားသောက်နေကြတဲ့ပုံတွေကို ကျဆုံးသူတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားလို့ ရင်နဲ့အမျှခံစားနေရသူတွေကို စာနာသမှုနဲ့ မတင်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာလည်း ကင်းမရွာတစ်ရွာလုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာ သူ့ရဲ့ခံ စားချက်ကို ” ယှဉ်ပြီး ပြောပြမယ်ရိုးရိုးလေးပဲတွေးကြည့်ပါခင်ဗျာ ဒီအချိန်မှာ စစ်သူပုန်တွေက မြို့တွေကို မီးရှို့ပြီးပြည်သူကို ဒုက္ခပေးတဲ့ သတင်းတင်ပေး share ပေးတာနဲ့ Vs ကိုယ့်အလှ ပုံတင်တာနဲ့ ဘယ်ဟာအကျိုးရှိစေမလဲ ? စစ်သူပုန်တွေမတရားလုပ်နေ လို့ ပြည်သူတော်တော်များများ စစ်ရှောင်ဘဝနဲ့ဒုက္ခရောက်ကြလို့ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ ကမ္ဘာကသိအောင် တင်ပေးတဲ့သတင်းနဲ့ Vs bar တွေ Club တွေသွားမုန့်တွေသွားစားတဲ့ပုံတွေတင်တာနဲ့ ဘယ်ဟာကအကျိုးရှိစေမလဲ? NUG ကပြည်သူအတွက်ကြိုးစားပေးလို့ထူးလာတဲ့သတင်းတွေ စစ်သူပုန်တွေမတရားလုပ်လို့ ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေကို ပြည်သူအားလုံးသိရအောင် တင်ပေးတဲ့သတင်းနဲ့ Vs ခင်မြဦး ဖြစ်ပြီး ရည်းစားဂယက်တွေ Korea ကားတွေကြည့် screen short တွေရိုက်ပြီးတင်ကြတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ ဘယ်ဟာက အကျိုးရှိစေမလဲ ? ” ဆိုပြီး စတင်မေးခွန်းထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီနောက်မှာလည်း ” နိုင်အောင်တိုက်နေရတဲ့ အခုချိန်လေးကို ကိုယ့်ရဲ့သေရေး ရှင်ရေး အရေးကြီးတဲ့ မိသားစုအရေးကလွဲလို့ ပြည်သူ့အရေးတိုင်းပြည်အရေး အားလုံးရဲ့အရေးကို တက်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေ ကူညီပေးကြပါလားခင်ဗျာ🙏🏻 သေချာလေးတွေးတောဆင်ခြင်ပြီး တော်လှန်ရေးအတွက် ကူညီပေးကြပါခင်ဗျာ🙏🏻❤️ ဒီစာရေးရတာလည်း တစ်နေ့တစ်နေ့ ပျော်ပါးစားသောက်တာတွေ မြင်နေရလို့အကူအညီတောင်းတာပါခင်ဗျာ အပြစ်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ နားလည်ပေးကြပါခင်ဗျာ🙏🏻❤️ယနေ့အခြေအနေပေါက်မြို့နယ် ကင်းမရွာ ရဲ့ပုံကို နှလုံးသားနဲ့ခံစားပြီးကြည့်ပေးကာ အသိတရား ဦးနှောက်နဲ့ စဉ်းစားနိုင်ကြပါစေ🙏🏻 ” ဟုဆိုတာ ထပ်မံသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း Brush ချပြီး တောထဲဝင်ခဲ့သူမို့ အားလုံးကိုလည်း သွေးမအေးစေချင်တဲ့ မေဦးရဲ့စိတ်ကတော့ လေးစားစရာပါ။
ကိုယ္တိုင္ကအလွအပႏွစ္သက္ေပမယ့္ တိုင္းျပည္ အေရးမွာေတာ့ ကိုယ္ႏွ စ္သက္တာေတြ အားလုံးကို ပစ္ခ်ၿပီး ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ေတာထဲကိုဝင္ကာ တိုင္းျပည္အေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနတဲ့ မိတ္ကပ္ေမဦးဟာ လက္ရွိမွာေသြးေအးၿပီး ပုံမွန္သြားလာေနၾကသူေတြကို တိုင္းျပည္ဟာႏြံထဲမွာပဲ ရွိေနေသးတဲ့အေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကား လာခဲ့ပါတယ္။ ခရီးသြားေနတဲ့ပုံေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး စားေသာက္ေနၾကတဲ့ပုံေတြကို က်ဆုံးသူေတြရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြဆုံးရႈံးသြားလို႔ ရင္နဲ႔အမွ်ခံစားေနရသူေတြကို စာနာသမႈနဲ႔ မတင္ၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္။
ဒီေန႔မွာလည္း ကင္းမ႐ြာတစ္႐ြာလုံးမီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရတဲ့အျဖစ္အပ်က္မွာ သူ႔ရဲ႕ခံ စားခ်က္ကို ” ယွဥ္ၿပီး ေျပာျပမယ္႐ိုး႐ိုးေလးပဲေတြးၾကည့္ပါခင္ဗ်ာ ဒီအခ်ိန္မွာ စစ္သူပုန္ေတြက ၿမိဳ႕ေတြကို မီးရႈိ႕ၿပီးျပည္သူကို ဒုကၡေပးတဲ့ သတင္းတင္ေပး share ေပးတာနဲ႔ Vs ကိုယ့္အလွ ပုံတင္တာနဲ႔ ဘယ္ဟာအက်ိဳးရွိေစမလဲ ? စစ္သူပုန္ေတြမတရားလုပ္ေန လို႔ ျပည္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စစ္ေရွာင္ဘဝနဲ႔ဒုကၡေရာက္ၾကလို႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံနဲ႔ ကမာၻကသိေအာင္ တင္ေပးတဲ့သတင္းနဲ႔ Vs bar ေတြ Club ေတြသြားမုန႔္ေတြသြားစားတဲ့ပုံေတြတင္တာနဲ႔ ဘယ္ဟာကအက်ိဳးရွိေစမလဲ? NUG ကျပည္သူအတြက္ႀကိဳးစားေပးလို႔ထူးလာတဲ့သတင္းေတြ စစ္သူပုန္ေတြမတရားလုပ္လို႔ ထြက္လာတဲ့သတင္းေတြကို ျပည္သူအားလုံးသိရေအာင္ တင္ေပးတဲ့သတင္းနဲ႔ Vs ခင္ျမဦး ျဖစ္ၿပီး ရည္းစားဂယက္ေတြ Korea ကားေတြၾကည့္ screen short ေတြ႐ိုက္ၿပီးတင္ၾကတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔ ဘယ္ဟာက အက်ိဳးရွိေစမလဲ ? ” ဆိုၿပီး စတင္ေမးခြန္းထုတ္လာခဲ့ပါတယ္။
ဒီေနာက္မွာလည္း ” ႏိုင္ေအာင္တိုက္ေနရတဲ့ အခုခ်ိန္ေလးကို ကိုယ့္ရဲ႕ေသေရး ရွင္ေရး အေရးႀကီးတဲ့ မိသားစုအေရးကလြဲလို႔ ျပည္သူ႔အေရးတိုင္းျပည္အေရး အားလုံးရဲ႕အေရးကို တက္ႏိုင္တဲ့ဖက္ကေန ကူညီေပးၾကပါလားခင္ဗ်ာ🙏🏻 ေသခ်ာေလးေတြးေတာဆင္ျခင္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ကူညီေပးၾကပါခင္ဗ်ာ🙏🏻❤️ ဒီစာေရးရတာလည္း တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ေပ်ာ္ပါးစားေသာက္တာေတြ ျမင္ေနရလို႔အကူအညီေတာင္းတာပါခင္ဗ်ာ အျပစ္ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ နားလည္ေပးၾကပါခင္ဗ်ာ🙏🏻❤️ယေန႔အေျခအေနေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ကင္းမ႐ြာ ရဲ႕ပုံကို ႏွလုံးသားနဲ႔ခံစားၿပီးၾကည့္ေပးကာ အသိတရား ဦးေႏွာက္နဲ႔ စဥ္းစားႏိုင္ၾကပါေစ🙏🏻 ” ဟုဆိုတာ ထပ္မံသတိေပးခဲ့ပါတယ္။ သူကိုယ္တိုင္လည္း Brush ခ်ၿပီး ေတာထဲဝင္ခဲ့သူမို႔ အားလုံးကိုလည္း ေသြးမေအးေစခ်င္တဲ့ ေမဦးရဲ႕စိတ္ကေတာ့ ေလးစားစရာပါ။
Previous post ပုရိသတွေ မနေနိုင် အောင် အမိုက်စား ပုံလေးတွေ တင်ပေး လာတဲ့ ခေးလုကြီး
Next post ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ သမီးလေး SHANDRA အိပ်နေတဲ့ပုံ လေး ကို တစိမ့်စိမ့် ကြည့်ရင်း ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ မေမေခင်လွှမ်း